သူ့အသက် ၂၀ ကျော်မှာ ကရင်ပြည် ကေအင်ယူနယ်မြေထဲ ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ ရခိုင့်တပ်မတော်ယာယီမှာ သူ့ နိုင်ငံရေး လက်ဦးဆရာ ခိုင်ရာဇာ၊ ခိုင်စောထွန်း ၊ ခိုင်ဖြူအောင်တို့နဲ့ လက်တွဲပြီး ဝင်ပါပါတယ်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်မှာ ထိုင်းနယ်စပ်ကနေ မြန်မာပြည်တောင်ပိုင်း၊ ပြီးတော့ ပင်လယ်ဖြတ်ပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကတဆင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ဝင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ ကံမကောင်းတော့ ၁၉၉၁ မှာ တကြိမ်၊ ၁၉၉၂ မှာ တကြိမ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာ အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ကျပါတယ်။ ပထမအကြိမ်မှာ ၂ လနဲ့ ၁၀ ရက်ပဲ ကျပေမယ့် ဒုတိယအကြိမ် စစ်ကြောင်းနဲ့အတူ နယ်ခြားကို ဖြတ်တာမို့ လက်နက်မှုနဲ့ ထောင် ၅ နှစ်ကျခံရပါတယ်။
2. ရခိုင်ပြည် လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်းခြင်း
ထောင်ကလွတ်လာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP နဲ့ လက်တွဲပါတယ်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ အစိုးရနဲ့ ALP တို့ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပဏမ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ပါတီကိုယ်စား ဦးဆောင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အထိ ALP ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းက ပါဝင်လာခဲ့တယ်။
3. ရက္ခိုင့်တပ်တော်သို့ ရောက်ရှိခြင်း
၂၀၁၄ မှာ ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် အချင်းချင်း သဘောကွဲကြရာက ALP နဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ပြီး ရခိုင်လူငယ် တဦးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင် နဲ့ ပူးပေါင်းကာ ရက္ခိုင့်တပ်တော် ရဲ့ နိုင်ငံရေး တောင်ပံ ဖြစ်တဲ့ ရက္ခိုင့်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ကို ပူးပေါင်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။